पहिलो पाठ्यक्रम | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: पहिलो पाठ्यक्रमहरू
पनीर - पकाउनुहोस्
प्रकाशित 25.06.2019 25.06.2019
यस्तो छिटो र स्वादिलो ​​सूप देशको खाजाको लागि उत्तम हो। प्रायः गर्मीको छुट्टीमा, खाना पकाउने जटिल भाँडा माझ्ने कष्ट हुँदैन। मलाई केहि सामान्य र प्रकाश मन पर्छ, ताकि विशेष बिना ...
वनस्पति संग सब्जी सूप - आहार र बच्चाको खानाको लागि
प्रकाशित 30.03.2019 30.03.2019
सबै क्षेत्रमा एक अद्भुत सूप। पौष्टिक, कम फ्याट, राम्रोसँग अवशोषित। यो दुबै बच्चाहरू र वयस्कहरूको मेनूमा बन्द गर्नुपर्नेछ जो उपचारात्मक वा आहारयुक्त खाना सिफारिस गरिन्छ। बाजराले एक अद्वितीय जटिल समावेश गर्दछ ...
स्वादिष्ट र स्वस्थ सामन पेट सूप - एक सुपर नुस्खा!
न्यानो माछाको सूपले तपाईंलाई चिसो दिनमा उत्साहित पार्न र खुशी पार्न मद्दत गर्दछ। हामी यसलाई साल्मन पेटबाट पकाउन प्रस्ताव गर्दछौं, यो सस्तोमा बाहिर आउँछ, तर धेरै स्वादिष्ट र स्वस्थ। साल्मन पेट, आफैलाई जस्तै ...
पास्ता संग दूध का सूप कसरी पकाउने?
कसरी दूध नूडल्स सूप बनाउन? पहिले सानो सिन्दूरलाई नुनको पानीमा थोरै मात्रामा पकाइन्छ, त्यसपछि जब यो लगभग पकाइन्छ र पानी लगभग उमालेको हुन्छ, दूध खन्याउनुहोस्। एक फोडामा, एक सानो ल्याउनुहोस् ...
के मलाई पाना पकाउनु अघि जौ हल्लाउन आवश्यक छ?
के मलाई अचार पकाउनु अघि जौ भिजाउनु पर्छ? तपाईं यसलाई मासुको साथ सँगै फाल्न सक्नुहुन्छ र केही बेर पकाउन सक्नुहुन्छ - यो उमाल्नेछ। प्याकेजमा बनाइएको विधि निश्चित छ, तर अनुभवले मोती जौलाई सुझाव दिन्छ ...
कसरी एक स्वादिष्ट गोभी का सूप पकाउने? ताजा गोभी
कसरी स्वादिष्ट गोभी सूप पकाउने? ताजा बन्दकोबी बन्दकोबी सूप ताजा बन्दकोबीबाट। तपाईं मासु, शोरबा पकाउन आवश्यक छ। कम्तिमा दुई घण्टा रमाईलो गर्नुहोस्। सूप कुखुरा वा गोमांस ब्रोथमा पकाउनु उत्तम हो। आलु ...
कसरी वास्तविक रूसी गोभी सूप सही तरिकाले पकाउने? के त्यहाँ यूरोपियन र साइबेरियन रेसिपीहरू बीच भिन्नता छ? http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html वास्या उत्किनबाट नुस्खा प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। म तुरून्त रिजर्भेसन गर्नेछु - मैले आफैलाई पकाइन (मेरी श्रीमती ...
कसरी स्वादिष्ट चिकन भाइरस पकाउने?
कसरी स्वादिष्ट चिकन ब्रोथ बनाउने? म माथि थप्नेछ निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै हिंस्रक फोडा, एक सानो सानो ज्वाला छ। अन्यथा शोरबा बादल हुनेछ। र कालो मटरको एक जोडी राख्नुहोस् ...
कतिपय चिसो पिसाबहरू, जमेको हुनुपर्छ?
तपाईले कतिपय स्थिर फ्याँकाहरू पकाउनु पर्छ? - २ - minutes मिनेट भुटेको सिपी कीराले राम्ररी धोइएका सिपी कीराहरू लिनुहोस्, त्यसबाट पानी निचोल्नुहोस् र मार्जरीन वा तरकारीको तेलले ग्रीस गरिएको प्रिहिएटेड फ्राईंग प्यानमा राख्नुहोस्।
कसरी दुध सूप पकाउन? सूपहरू पूर्ण दुध वा दूध र पानीको मिश्रणको साथ तयार गरिन्छ। तपाईं चिनी वा सम्पूर्ण पाउडर बिना कन्डेन्स्ड बाँझी दूध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दुध सूप पास्ता संग पकाइन्छ ...
कसरी घर मा स्वादिष्ट माछा सूप पकाउन ?? पानी राख्नुहोस्, आलुलाई राम्रो फोडामा कम गर्नुहोस् र थोरै नुन थप्नुहोस्, जस्तो कि आलुमा तेलमा क्यान्ड माछाहरू पकाइन्छ, प्याज फ्याँक्नुहोस् र बारीक काटिएको प्याज, छोड्नुहोस् ...
अण्डा बिना घरको नूडल्स कसरी कुकिन्छ
अण्डाहरू बिना कसरी घर बनाउने चाउचाउ पकाउने होम पातल नूडल्स एक कचौरामा १०० ग्राम पिठो हाल्नुहोस्, एक चुटकी नुन, १ चम्चा जोड्नुहोस्। l तरकारी तेल र 100 चम्मच मा डालो। l उम्लिरहेको पानी ...
अनुभवी गृहिणीहरू मद्दत! कृपया बर्ब र चिकन संग पनी पकाउने विवरणमा वर्णन गर्नुहोस्।
अनुभवी होस्टेस मद्दत! कृपया जौ र कुखुराको साथ अचार कसरी पकाउने भनेर विस्तृत वर्णन गर्नुहोस् ट्याग: मासु सूप ()१), रूसी भोजन () 31), अचार ()) सबै ट्याग जौको साथ अचार। फोटो नुस्खा ...
के लिए चिकन भाइरस उपयोगी छ?
तपाईंको लागि कसरी कुखुराको ब्रोथ राम्रो छ? ठिक छ, यदि तपाईं कुखुरामा एन्टिबायोटिकको साथ अवस्था हेर्नुभयो र चिन्ताको आधारमा विशेष रूपमा तरकारी ब्रोथमा टाँसिनुभयो भने, प्रश्न उठ्छ। मा नाइट्रेट्स को बारेमा के ...
र zander सूप लागि एक नुस्खा लेख्नुहोस्?
र पाइक पर्च फिश सूप को लागी एक नुस्खा लेख्न? सानो पाइक पर्च, प्याजको टाउको, साना टमाटरको १०० ग्राम, आलुको १ 100० ग्राम, मरिच, नुन, जडीबुटीहरू। ईन्ट्राईल र तराजुबाट पाइक पर्च छुनुहोस्, राम्रोसँग धुनुहोस् ...
कसरी प्याज सूप पकाउन? प्याजको मात्र प्याजको सानो टाउको काट्नुहोस् बारीक साउप्यानमा तरकारी तेलमा साटा। गहुँको पीठोको एक बड़ा चमचा, मसाला र स्वादको लागि नुन थप्नुहोस्। यदि…
कति पटक चिकन पकाउने?
कुखुरा पकाउन कति समय लाग्छ? कुखुरा छिटो पकाइन्छ। जब यो उम्लन्छ, २० मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। र यो सजिलैसँग जाँच्नको लागि धेरै सरल छ। एउटा चक्कु संग कुखुरा यदि यो नरम छ र रगत छैन भने, यो पकाइएको छ। त्यसो ...
मलाई सॉसेज पनीर सूपको लागि नुस्खा बताउनुहोस्
मलाई सॉसेज चीज सूपको नुस्खा बताउनुहोस् मेरो परिवारमा, प्रसंस्कृत पनीरको सूप एक सफलता होइन, तर म यसलाई सॉसेज चीजको साथ वास्तवमै मनपराउँछु। म नुस्खा उद्धृत गर्दछ किनकि यो मूल स्रोतमा छापिएको थियो - ...
कसरी ताजा बन्दकोबीबाट बन्दकोबी सूप पकाउने? हम्म, मैले एकल सामान्य विधि फेला पारेको छैन। के कसैले चरणबद्ध चरणमा बताउन सक्नुहुन्छ कसरी तलको तत्त्वहरूबाट गोभी सूप पकाउने। ताजा बन्दकोबी, आलु, गाजर, प्याज, टमाटर पेस्ट, ...
74 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,545 प्रश्नहरू।